Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu si Budapest na Dubai na flydubai ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Hungary na -agbasa akụkọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa UAE
Ijere ma ndị njem achụmnta ego ma ndị njem nlegharị anya otu aka, mbata nke flydubai ga -akwalite ikike ọdụ ụgbọ elu Budapest ka ọ bụrụ nnukwu obodo dị oke mkpa. Ịkekọrịta koodu na Emirates n'okporo ụzọ a na-emepe karịa ụgbọ elu 190 maka ụgbọ elu gụnyere Asia, Africa, Australia na US.
Ọdụ ụgbọ elu Budapest bụ akara njikọ flydubai na Dubai site na isi obodo Hungary.
Ọrụ ugboro anọ a na-eme kwa izu n'obodo ukwu nke Middle East ga-arụ ọrụ kwa afọ.
Ọbịbịa nke flydubai na -agbasawanye njikọta ọnụ ụzọ Hungaria na etiti Dubai.
Na -eme mmemme ọbịbịa onye mmekọ ụgbọ elu ọhụrụ ọhụụ, Ọdụ ụgbọ elu Budapest akara akara njikọ flydubai na Dubai site na isi obodo Hungary. Ọrụ ugboro anọ a na-eme kwa izu n'obodo ukwu nke Middle East ga-arụ ọrụ kwa afọ ma gbasaa njikọta ọnụ ụzọ nke Hungary na etiti Dubai.
Na mwepụta ahụ, Balázs Bogáts, Onye isi mmepe ụgbọ elu, Ọdụ ụgbọ elu Budapest kwuru, sị: “Ijere ma ndị njem achụmnta ego ma ndị njem nleta ozi, mbata nke flydubai na akwụkwọ mpịakọta ụgbọ elu anyị ga -akwalite ike anyị na nnukwu ọdụ mba ụwa. Ịkekọrịta koodu na Emirates n'okporo ụzọ a na-emepere ndị njem anyị ihe karịrị ebe 190 gụnyere Asia, Africa, Australia na US. ”
Ghaith Al Ghaith, onye isi ala, flydubai, kwuru, sị: “Anyị ahụla ka ọnụ ọgụgụ na -arịwanye elu maka njem n'oge ọkọchị a na mbido ụgbọ elu na Budapest, anyị na -agbasawanye netwọkụ anyị n'oge oge oyi iji nye ndị njem anyị nhọrọ maka njem. Ọrụ ọhụrụ anyị malitere na Hungary ga -ewusi njikọ anyị na UAE ike. ”
Flydubai, n'ụzọ iwu kwadoro ụlọ ọrụ ụgbọ elu Dubai, bụ ụlọ ọrụ mmefu ego gọọmentị nwere na Dubai, United Arab Emirates nwere isi ụlọ ọrụ ya na ọrụ ụgbọ elu ya na Terminal 2 nke ọdụ ụgbọ elu mba ofesi Dubai. Ụgbọ elu ahụ na -arụ ọrụ ngụkọta ebe 95, na -eje ozi na Middle East, Africa, Asia na Europe site na Dubai.
Ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke Budapest Ferenc Liszt, nke a na -akpọbu Budapest Ferihegy International Airport nke a na -akpọkarị Ferihegy, bụ ọdụ ụgbọ elu mba ofesi na -eje ozi isi obodo Hungary na Budapest, na nke kacha ibu n'ọdụ ụgbọ elu azụmahịa anọ nke mba ahụ.
Ọdụ ụgbọ elu mba ofesi Dubai (IATA: DXB, ICAO: OMDB) bụ ọdụ ụgbọ elu mba ofesi na -eje ozi na Dubai, United Arab Emirates, ọ bụkwa ọdụ ụgbọ elu kacha ọdụ ụgbọ elu n'ụwa site na njem ndị njem mba ofesi. Ọ bụkwa ọdụ ụgbọ elu nke iri na iteghete kacha arụ ọrụ n'ụwa site na njem ndị njem, otu ọdụ ụgbọ elu kacha ebu ibu n'ụwa, ọdụ ụgbọ elu kacha arụ ọrụ maka mmegharị Airbus A380 na Boeing 777, na ọdụ ụgbọ elu nwere ọnụ ọgụgụ ndị njem kacha elu n'otu ụgbọ elu.